IBeijing Duomilai ngummeli womboniso weNRA eChicago, e-USA
I-CHECKEDOUT yathatha inxaxheba kwi-2019 NRA show eChicago USA
Uyilo lwakutshanje lweyunifomu yompheki kunye neebarista zeebhayibhile zaziboniswe apho, into esiyithathileyo yingubo yangaphantsi enemikhono emide, isikhwama esimfutshane sokuphanda ingqekembe yejegi, iiaprons zebhayibhile, iiaproni ezinesiqingatha kunye neeapile zewuno ezilungele abasebenzi abalindelweyo. sithathe neempahla zentloko njengee-baseball cap, i-cap yomqhubi kunye ne-neckerchiefs njl.
Izitayile zodidi kunye nefashoni zitsala abathengi abaninzi beze kusityelela kwaye bathethe malunga nentsebenziswano. Phantse zonke iindwendwe zivela kumazwe aseMelika kwaye zonke iindwendwe zinomdla kwiimveliso zethu. Abanye abathengi bafuna ukuba ngumhambisi njengoko babecinga ukuba iimveliso zineemarike ezilungele iimveliso eMelika.
Umsebenzi olungileyo kunye neemveliso zeprimiyamu esemgangathweni unokuhlangabezana neemfuno zabathengi basekhaya. Ilaphu esilisebenzisayo lenziwe ngekonkile yeXinjiang Aksu eneempawu ezingafaniyoyo nanjengepilisi, akukho-fiphu, akukho zithwala, ubomi benkonzo ngamaxesha ama-2 engubo eqhelekileyo yokupheka, zonke i-CHECKEDUT chef zangaphantsi ziya kuhlanjwa ngaphezulu kwamaxesha angama-200 . Inokunceda amashishini ukuba agcine iindleko.
Ngomdlalo, sidibene nabathengi abohlukeneyo abavela kumazwe angama-36 ahlukeneyo kwaye bafumana izimvo zabo ngohlobo lwengubo yechephe kunye neeapile abafuna ukuyenzela abasebenzi babo abapheki.
Izinto ezingama-80 ezibonisiweyo zathengiswa ngexesha lomdlalo, ezinye zeyunifomu yompheki zithengiwe, ezinye zithengwe sisikolo sobuhlobo kwaye ezinye zithengwe yinkampani eliqela njengeesampulu into abafuna ukuyenza kukuxoxa neqela labo emva koko baqhubeke malunga nentsebenzo.
Iapilkosi ithengisiwe ngaphandle kwaye ithathwa ngu-barista kunye ne-bartenders.
Lo mboniso lithuba lethu lokubonisa amandla ethu kumzi mveliso we-chef njengoko sikwi-NO.1 Brand yase China enembali ende ene-26years. IQESA LOKUGQIBELA liya kuhlala lisebenza nzima ukuze lifezekise iimfuno zabathengi zehlabathi zengubo yokupheka kunye neefaskoti.
Ukoneliseka komthengi yinjongo yethu engapheliyo